Abaqhubi boKhenketho eTanzania bakhupha i-150 yezigidi kwiMfazwe yokulwa nokuzingela ngokungekho mthethweni
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseTanzania eziziiNdaba » Abaqhubi boKhenketho eTanzania bakhupha i-150 yezigidi kwiMfazwe yokulwa nokuzingela ngokungekho mthethweni
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseTanzania eziziiNdaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Jonga iNtetho ngeeTanzania zabaSebenzi boKhenketho
Abadlali boKhenketho baseTanzania baphose izigidi ngezigidi zeedola kwinkqubo ebanzi yokulwa nokuzingelwa ngokungekho mthethweni eyilelwe ukukhusela ilifa lemveli lezilwanyana zasendle ezixabisekileyo zezilwanyana zaseAfrika eSerengeti National Park.
Amathafa amakhulu eSerengeti aquka i-1.5 yezigidi zehektare ze-savannah.
Inendawo enkulu yokufuduka engafakwanga ye-2 yezigidi zeenyamakazi kunye namakhulu amawaka amabhadi kunye neqwarhashe.
Bonke bayazibandakanya kuhambo lweesetyhula lwe-1,000-yeekhilomitha ezinde ezihamba amazwe amabini akufutshane eTanzania naseKenya, zilandelwa ngabahlaseli babo.
Ngaphantsi kwephiko lombutho wabakhenkethi baseTanzania (TATO), abatyali zimali bezokhenketho baye bakhupha i-150 yezigidi zeedola (i-US $ 65,300) ukukhuthaza inkqubo yokurhola, ukuphinda kabini ukuzibophelela kwabo kwimfazwe enegazi ngokuchasene nokuzingela okungekho sikweni kodwa kubulala okwenzekayo eSerengeti.
Unobhala osisigxina weMithombo yeNdalo kunye ne-Ofisi yoMphathiswa Wezokhenketho, uGqirha u-Allan Kijazi, uthi indawo ebekuqhutywa kuyo ubuhlwempu bokuzingela ngokungekho mthethweni ithe chu kodwa ngokuqinisekileyo yaphumelela kwimisebenzi emikhulu nakwezorhwebo, ibeka ipaki yelizwe laseTanzania eSerengeti phantsi koxinzelelo oluhlaziyiweyo emva kwesihlanu -ukuqina konyaka.
Le ndlela ilityelweyo yokuzingela ngokungekho mthethweni ejongene nokubulawa kwabantu abaninzi eSerengeti ikhuthaze abathathi-nxaxheba kwezokhenketho ukuba bathathe inxaxheba kwaye baseke inkqubo yokurhola phakathi ku-Epreli ka-2017, phantsi komfuziselo woBambiswano lukaRhulumente noShishino lwaBucala (PPP) olubandakanya iiTanzania National Parks (TANAPA) , Umbutho waseFrankfurt Zoological (FZS), kunye neziqu zabo.
Ukunikezela ngetshekhi ye-Sh150 yezigidi ukusuka kwi-TATO ukuya kwi-FZS, ephumeza inkqubo yokurhola, uMphathiswa Wezendalo kunye nezoKhenketho, uGqirha Damas Ndumbaro, wabancoma abo babandakanyekayo ngokubeka imali yabo apho imilomo yabo ikhoyo.
“Ndiyayibulela ngokungazenzisiyo i-TATO ngeli nyathelo lingakholekiyo lokuxhasa eli phulo lokulwa nokuzingelwa kwabantu ngokungekho mthethweni. Eli nyathelo liyakuqinisekisa ukhuseleko lwepaki yethu exabisekileyo yelizwe kunye nezilwanyana zasendle ezixabisekileyo ngaphakathi, ”utshilo uGqirha Ndumbaro. Ufunge ukuba uzakusebenzisana neTATO ekuqhubeleni phambili iphulo lolondolozo kunye nokuphuhlisa ishishini lokhenketho.
Usihlalo we TATO, Mnu.Wilbard Chambullo, uthe phambi kokuba kuqhambuke ubhubhane we-COVID-19, abaqhubi bezokhenketho babedla ngokuzinikela ukufaka idola elinye abalifumene kubakhenkethi, kodwa ngenxa yomsinga wobhubhane, abatyali mali kwafuneka bavale indawo zabo bathumele bonke abasebenzi babo ekhaya.
Kwimizamo yayo yokuzama ukusinda, i-TATO, phantsi kwenkxaso yeNkqubo yeZizwe eziManyeneyo (UNDP), yaxhoma iziseko zoncedo kwezempilo ezinje ngamaziko okuqokelela iisampulu e-COVID-19 eSeronera naseKogatende eSerengeti apho umbutho wazisa i-Sh40, 000 kunye ne-Sh20,000 yemirhumo kwisampuli nganye evela kumalungu e-TATO kunye namalungu angengawo ama-TATO ngokwahlukeneyo.
"Thina, eTATO, savumelana ngamxhelomnye ukuba sizonikezela ngemali esiyiqokelele kula masampulu e-COVID-19 yokuqokelela isampulu ukukhuthaza inkqubo yokurhola," utshilo uMnu Chambullo, phakathi kwentswahla evela kubaphulaphuli.
Umsebenzi obalaseleyo, phakathi kwezinye izinto, ubusenzeka, ngenxa yobambiswano lobathathu emnye phakathi kwe-UNDP, i-TATO, kunye norhulumente kwi-Ofisi yoMphathiswa Wezendalo kunye nezoKhenketho kunye noMphathiswa Wezempilo.
“Ndinombulelo ongazenzisiyo ngemali esithe sanikela ngayo namhlanje kulenkqubo yokuxhomisa amanzi iphakathi… kwezona ziganeko zibalulekileyo kwintsebenziswano yethu ne-UNDP, i-TATO, kunye ne-Ofisi yoMphathiswa weMithombo yeNdalo nezoKhenketho, kunye ne-Ofisi yoMphathiswa Wezempilo. , ekomelezeni ukubuyela kwezokhenketho eTanzania, utshilo u-CEO we-TATO, Mnu Sirili Akko.
Inkqubo ye-De-snaring, eyokuqala eluhlobo lwayo, ephunyezwe yi-FZS - umbutho odumileyo wolondolozo lwamazwe aphesheya onamava angaphezulu kweminyaka engama-60- yenzelwe ukususa imigibe ebanzi ebekwe zizilwanyana zasendle zasehlathini ukubambisa izilwanyana zasendle eSerengeti kunye ngaphaya.
Enika amagqabantshintshi, uMlawuli welizwe weFrankfurt Zoological Society, uGqirha Ezekiel Dembe, uvakalise umbulelo kubaqhubi bezokhenketho ngokudibanisa umxholo wolondolozo kwimodeli yeshishini labo.
“Lo ngumkhwa omtsha kuluntu lwethu loshishino ukufaka isandla [kwiphulo] lolondolozo. Isiqubulo sethu kule minyaka ingama-60 idlulileyo besiseza kuhlala siyiyo, iSerengeti ayisokuze ife, kwaye ndiyazingca ngokuba abakhenkethi ngoku bayazibandakanya neenzame zethu, ”uvale ngelitshoyo uGqirha Dembe.
Iqale phakathi ku-Epreli ka-2017, inkqubo yokurhintyela ilawulwe ngempumelelo isusa yonke imigibe yocingo engama-59,521, isindisa izilwanyana zasendle ezingama-893 ukuza kuthi ga ngoku.
Uphononongo lwe-FZS lubonisa ukuba imigibe yocingo inoxanduva lokubulala izilwanyana zasendle eziyi-1,515 kwiSerengeti National Park kwisithuba sika-Epreli 2017 ukuya kuthi ga ngeyoMsintsi 30, 2021.
Nje ukuba ukuzingela ngokungekho mthethweni eSerengeti kube yinto enkulu kunye nentengiso, ipaki yelizwe yase-Afrika iwele phantsi koxinzelelo oluhlaziyiweyo lokujongana nengxaki emva kweminyaka emibini. Izilwanyana zasendle eSerengeti, indawo yeLifa leMveli yeHlabathi, wayeqale ukubuyela kwimeko yesiqingatha sexesha lokuzingelwa kwamabamba endlovu, ephantse yazisa indlovu kunye nemikhombe emadolweni.
I-Tanzania Wildlife Research Institute (i-TAWIRI) yaqhuba "Ubalo lweNdlovu eNkulu" kwii-7 zezinto eziphilayo ukusuka ngoMeyi ukuya kuNovemba 2014 xa kwafunyaniswa ukuba "iimbumbulu zabazingeli" babulala iipesenti ezingama-60 zabemi beendlovu kwiminyaka emihlanu nje.
Kwizibalo zokwenyani, iziphumo zokugqibela zobalo lwabonisa ukuba indlovu yaseTanzania yehle ukusuka kwi-109,051 ngo-2009 ukuya kuma-43,521 kuphela ngo-2014, nto leyo ebonakalisa ukwehla kweepesenti ezingama-60 kwisithuba esiphantsi kovavanyo.
Esona sizathu sibangelwe koku kuncipha yayikukunyuka okumangalisayo kokubulawa kwabantu ngokungekho mthethweni kwiindawo zombini ezilawulwayo nezingavulekanga, iTanzania ibisokola ukulwa nayo kule minyaka idlulileyo nangona kungenazibonelelo zaneleyo kunye neetekhnoloji.
Njengokuba ayonelanga, mhlawumbi ulibele kwaye uthule kodwa ubulala inyama yasendle ehlathini ngaphakathi kweSerengeti Park ngoku ubeka ezona zilwanyana zasendle zihamba phambili kumathafa aseMpuma Afrika phantsi kwesoyikiso esitsha.